Lioka 18 :1 « Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy, fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka, »
1Tesaloniana 5 :17« Mivavaha, ka aza mitsahatra. »
Mifankahazara amin’ny Tsitoha : misy fifandraisana tsy tapaka amin’i Jesosy
Joba 22:21« Mifankazara amin'ny Tsitoha ianao, dia hiadana; Izany no hahatongavan'ny soa aminao. »
- Tsy afaka mandre ny feon’ny Tompo ianao raha tsy ampy vavaka.
- Rehefa mifandray tsara amin’Andriamanitra isika dia ho ampahafantariny antsika ny sitrapony.
- Rehefa mivavaka dia
- manàna faharetana.
Matio 24:13« Fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. »
Maharitra hatramin’ny farany, mbola mahatahiry ny finoana ve ianao?
Inona no atao mba hampaharitra mivavaka?
1.- Mitombo aloha vao maharitra.
2.- Maharitra amin’ny fiainam-pahamasinana
- Misy fomba fivavaka
- Tanjona kendrena : Ny fiainana mandrakizay
- Miorina eo ambonin’ny Tenin’Andriamanitra ny fivavaka.
Mila miambina isan’andro amin’ny fomba fitondran-tena, ny fomba firesaka, ny fiainam-pahamasinana
A.- Fomba fivavaka
Tsy mivavaka mikasika ny olana; fa mivavaka mitady ny firaisana amin’ny Fanahy
- Manaiky ny Tompo
- Mivavaka amin’ny Fanahy
- Manàna “objectif” Tsy ny hahatafita ety an-tany no ho tanjona rehefa hivavaka.
Indraindray dia ampiasaintsika ny Tenin’Andriamanitra ao amin’ny Deoteronomia 28:13 “Dia hataon’i Jehovah ho lohany hianao, fa tsy ho rambony “ Fa ny tena zava-dehibe eo amin’io Teny io dia ny toy ho rambony ara-panahy. Aza manaiky hirefarefa, fa asehoy ny olona fa tena zanak’Andriamanitra ianao.
Manaraka ho azy ny fitahiana.
Fa tsy ho mpanan-karena be ianao no sady tsy ho mahantra loatra tahaka ny vavaky ny mpanao salamo.
Mivavaka mitady firaisana amin’ny Fanahy Masin’Andriamanitra
- Mivavaka tsy tapaka.
Jaona 16:13« Fa raha tonga ny Fanahin'ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra; fa tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa; ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. »
- Tsy ny ahatafita antsika ety an-tany no mahamaika ao anatin’ny vavaka.
- Mitombo amin’ny hery no tadiavin’Andriamanitra amintsika fa tsy kristiana“stationnaire” na midina ny “courbe”
Ohabolana 24:5 “ Be hery ny lehilahy hendry, eny, mitombo hery ny olona manam-pahalalana.”
Ny nofo dia manohitra ny fanahy, misy ady tsy maintsy hatrehina, misy ezaka tsy maintsy hatao
- Miezaka mitady fahamasinana
Hebreo 12:14 “Miezaha mitady fihavanana amin’ny olona rehetra ary fahamasinana; fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo.”
- Misy zavatra lavina, tsy maintsy ahena :
- Ny tori-maso,
- Ny sakafo,
- Ny zavatra jerena,
- Ny teny henoina,
- Ny resaka resahina
Raha mbola tsy vitanao ireo dia tsy afaka mihaino ny Tenin’Andriamanitra ianao. Mila miresaka amin’Andriamanitra foana raha te hitombo sy te haharitra amin’ny tanja-panahy. Miresaka Tenin’Andriamanitra no fifampitaizana.
- Mianatra ny toetran’Andriamanitra, mivelona amin’ny fiveloman’Andriamanitra ianao rehefa tena manana firaisana amin’Andriamanitra.
Tsy maintsy mitovy ny toetran’Andriamanitra, ny toetran’ny Fanahy Masina ary ny toetranao.
1 Petera 2:1 “Koa esory ny lolompo rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fihatsarambelatsihy sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra.”
Ny Tenin’Andriamanitra milaza :
- aza mandainga; kanefa ianao dia mpandainga,
- fa esory ny lolompo rehetra; kanefa ianao tena manana izany ao am-ponao ao
- Andriamanitra dia Fitiavana; kanefa ianao tsy manam- pitiavana
Dia aiza ny Fanahy Masina ao aminao? Diso izany, tsy ny Fanahin’ny fitiavana izany no ao anatinao ao!
- Fandinihana ny tenanao eo anatrehan’Andriamanitra.
- Nahoana ianao no mbola tia ota?
- Tsy tokony ho entanina isika amin’ny toetran’Andriamanitra fa mivoaka ho azy ny :
- fanahin’ny fanetrehan-tena
- fanahin’ny fahendrena
- .fanahin’ny faherezana
- - Aoka isika ho tso-po sy mahintsy rehefa mivavaka.
Isika rehefa mivavaka dia ny resaka no be dia be, fa ny ao anatin’ny fo ao dia tsy mahintsy.
- Jereo tsara ny toetratsika, fa Andriamanitra dia tsy tia ota.
Rehefa mahavita ny asany Jesosy dia nitokana nivavaka isan-kariva mba hanombo ilay nofo. Satria mihatrika zavatra isan’andro.
Tsy mora ny mitazona ny fiainam-panahy ilay “jiro” fa misy mamingana isan’andro; ary ny devoly ihany koa hanao izay hahalavo anao hatrany.
Apokalypsy 21:7 “ Izay maharesy no handova izany zavatra izany; ary ho Andriamaniny Aho, ary izy ho zanako.”
Noho izany dia izao no ataovy, rehefa nandresy fakam-panahy ianao anio dia misaora ny Tompo; fa ny ampitso mbola ho hita eo indray.
Mifankahazara amin’Andriamanitra amin’izao fotoana milamina izao dia ho mora ho anao ny miantso ny Tompo amin’ny fotoan-tsarotra.
Amin’izay zavatra rehetra ataonao dia miresaha amin’ny Tompo foana ianao.
Mianara mivavaka amin’ny Fanahy
- Fantaro raha tena ny fanahinao no mivavaka ao aminao.
Rehefa tsy mahita holazaina intsony ianao dia mivavaka amin’ny saina ianao izay.
Ataon’ny devoly foana izay tsy hahatonga anao hifantoka amin’ny vavaka.
- Firaisana amin’ny Fanahy Masina mampandeha antsika amin’ny fahamasinana.
Ny fiainam-pahamasinana no tanjona tokony hanananao rehefa mivavaka ianao.
Fomba fivavaka :
- Jesosy ô! Ataovy hitan’ireo olona mifanerasera amiko fa ato anatiko ianao, velona ato anatiko ianao.
- Ataovy miseho amin’ny fitondran-tenako ny toetranao Tompo ô!: ny fahatsaranao sy ny fahamarinanao, ny fahamasinanao ny fahadiovanao
- Mba ho marina amiko ny teninao ho tsy izaho intsony no velona ato amiko.
Galatiana 2:20 “ Voahombo miaraka amin’i kristy amin’ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko. (...)”
- Fanoloran-tena ho fanatitra ho an’Andriamanitra no hatao fa aza mangataka zavatra foana.
- Tandremo sao mavesatra loatra ny nofo noho ny Fanahy.
- Inona no mampihavaka anao amin’izao tontolo izao?
Na ny sakafo hohanina, na ny fomba fiakanjo.
Aza manao kitoatoa eo amin’ny fanompoana an’Andriamanitra, eo amin’ny fiainana kristiana.
- Mila fitandremana ny fitoriana izay ataontsika io.
Mila mifanaraka tsara amin’ny fomba fiainana ny toriteny izay ambara. Aza manao mpitari-bato vilam-bava!
- Aza miheritreritra mihintsy koa fa efa ela no nanarahanao ny Tompo.
Ataoko toy ny tsy nahazo aho.
Filipiana3:12-13 “Tsy toy ny efa nahazo sahady aho, na efa tanteraka sahady; fa miezaka aho hihazona izay nihazonan’i Kristy Jesosy ahy. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako; fa zavatra iray loha no ataoko; manadino izay zavatra ao aoriana ka mihezaka hanatratra izay zavatra eo aloha,”
Ianareo izay efa mijoro tsara, mitandrema sao lavo.
1Korintiana 10:12 “Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara, dia aoka izy hitandrina, fandrao ho lavo.”
Ny zavatra izay kendren’ny devoly dia ny tsy hahatonga antsika anay amin’ilay Jerosalema vaovao. Kely sisa dia ho avy ny Tompo; koa aleo miady hatramin’ny farany, ary mitazona ny fahamasinana hatramin’ny farany.
Raha mavesatra loatra ny nofonao noho ny ara-panahy dia ho tavela ianao.
Lioka 17:34-35 “Lazaiko aminareo fa amin’izany alina izany hisy roa lahy miray fandriana; ny anankiray horaisina, ary ny anankiray havela. Hisy roa vavy miara-mitoto vary; ny anankiray horaisina, ary ny anankiray havela.”
- Ataovy “de coté” ny olana misy eo aminao fa Izy mahalala ny hevitra ho anao
- Manolora ny fiainanao ho an’Andriamanitra ka mankatoava ny Tompo
- Manaiky ny fitondran’Andriamanitra ny fiainanao
- Manandrata ny Tompo eo amin’ny fiainanao fa tsy amin’ny vavanao fotsiny.
- Mandehana amin’ny fahamasinana, amin’ny fahadiovana, amin’ny fahamarinana.